तपाईकी श्रीमतीले धोका त दिइरहेकी छैनन् ? यसरी थाहा पाउनुहोस् – ramechhapkhabar.com
भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीको नाता सबैभन्दा उत्तम र पवित्र नाता हो । तर कहिले काँही भने श्रीमान् श्रीमतीबीच एक अर्काप्रति अविश्वस पैदा भएर सम्बन्ध नै धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध टुट्नुमा श्रीमान र श्रीमती दुवैको कमजोरी हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा भने श्रीमानले श्रीमतीको ख्याल नगर्दा र श्रीमतीले श्रीमानका भन्दा अरुका विश्वास गर्नाले पनि सम्बन्ध धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
हिजो आज विकराल बन्दै गइरहेको समस्या के पनि हो भने विभिन्न कारणले श्रीमती अर्कैसँग सल्किनु । श्रीमती अर्कैसँग लहसिन थालेको पहिले नै थाहा पाउन सक्यो भने त्यसबाट हुने क्षतिबाट बच्न सकिन्छ । श्रीमती अर्कैको संगतमा लागेको कसरी थाहा पाउने त ? यो आलेखमा श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिएको कसरी थाहा पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।